Isazi sesimo sezulu sahluke njani kwi-meteorologist? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ngaba wahluke njani umntu kwisimo sezulu?
Ngokwazi kwam, iingcali zemozulu ziingcali eziqwalaselayo, zilinganise kwaye zirekhodishe iziphumo zamaphetshana afundwayo ezona nkqubo zininzi zemozulu kunye neziganeko ezenzekayo kwiplanethi yethu, kwaye iingqikelelo zemozulu ziingcali abathi ngokweziphumo zolu hlakanyo lwemozulu, sele bequlunele iimephu ezithile ezihambelana kunye, benze ezabo iimephu. izigqibo, kunye nokuvelisa iimozulu ezahlukeneyo zexesha elifutshane, eliphakathi kunye nelide. Ke, kuyavela ukuba phantse wonke umsebenzi ophambili udla ngokwenziwa ziingcali zeemitha, nangona kunjalo, phantse lonke udumo lokugqibela luya kuya kubaqikeleli bemozulu.
Nguwuphi umahluko phakathi kwesazi sezulu kunye nesazi semozulu?
Meteorologist -Ingcali yesayensi efunda ngokujonga kunye nokurekhoda iziphumo zokujonga kunye nemilinganiselo yeeparamitha zeenkqubo zemozulu kunye nezinto zendalo.
Isazi sezulu -Le yingcali yemozulu ethe, ngesiseko sokulungiswa kweziphumo zojoliso lwemozulu, zenza iimephu ezivumelanayo, zeza nezigqibo kunye nemiba yesimo sezulu esifutshane kunye nexesha elide.
Isazi semozulu sisimo seenkcukacha-manani, uqokelela idatha kwizixhobo kwaye uzilungise, kwaye isazi sezulu siyishwankathela le datha, sihlalutya imeko yasesibhakabhakeni senze uqikelelo lwemozulu ngekamva.
Imibuzo ye-20 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-3,393.